ရွှေဥသြ: ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ ဂျူးလိယက်ဖူးချစ် (အခဏ်း ၈)
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ ဂျူးလိယက်ဖူးချစ် (အခဏ်း ၈)
၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့။
ကျနော့် အကျဉ်းခန်းရှေ့တွင် ခါးပတ်တခုချိတ်ထားသည်။ ကျနော်၏ ခါးပတ်ဖြစ်သည်။ ဤကား ထောင်ပြောင်းမည့်
အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သတည်း။ ကျနော့်အား ရုံးတင်စစ်ဆေးရန် ကျနော့်ကို ရိုခ်သို့ ခေါ်သွားကြတော့မည်၊ ထို့နောက် ဘာလာမည်၊ ညာလာမည် စသည်ဖြင့် ဖြစ်သတည်း။ အချိန်သည် ကျနော်၏ အသက်တချပ်မှ နောက်ဆုံးတလုပ်စာကို အငန်းမရ ကိုက်ဖြတ်လျက်နေပေပြီ။ ပန်းကရာ့စ်တွင် နေခဲ့ရသော ရက်ပေါင်းလေးရာ့တဆယ့်တရက်တို့ လျင်မြန်စွာ ကုန်လွန်သွားပုံမှာ နားမလည်နိုင်အောင်ပင် ရှိသည်။ နောက် ဘယ်နှစ်ရက်ကျန်သေးသလဲ။ ဒီရက်တွေမှာ ကျနော် ဘယ်ကိုရောက်နေမှာလဲ။ ဒီရက်တွေဟာ ဘယ့် နဲ့ နေလိမ့်မလဲ။
မည်သို့ပင်ရှိစေ၊ ထိုရက်များအတွင်း စာရေးနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကား မပေါ်ဖို့က များသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်၏ နောက်ဆုံးသက်သေထွက်ချက်ကို ရေးထားခဲ့ပါသည်။ ဤသည်ကား သမိုင်း၏တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်သည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းအတွက် သက်သေခံနိုင်မည့်သူများတွင် ကျနော်တယောက်သာ အသက်နှင့် ခန္ဓာမြဲ၍ နေသေးပုံပေါ်ပါသည်။
……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ချက်ကိုစလို ဗားကီးယားပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီတခုလုံး အဖမ်းခံရသည်။ ဤသို့သော် အချိန်ဆိုးမျိုးသို့ ဆိုက်ရောက်လျှင် အစားထိုးရန် ပြင်ဆင်ထားသော အရံခေါင်းဆောင်များလဲ အဖမ်းခံကြရသည်။ ပါတီအပေါ်သို့ ဤမျှပြင်းထန်နက်ရှိုင်းသော ဒဏ်မျိုး အဘယ့် ကြောင့် ကျရောက်လာနိုင်ရသနည်းဟူသောကိစ္စကို ယခုထက်ထိ အကြောင်းရှာ၍ တိတိကျကျမရသေး။ တနေ့ ဂက်စတာပိုအရာရှိများကို စစ်ဆေးမေးမြန်းသည့် အခါ၌ကား ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သော သဲလွန်စများ ပေါ်လာနိုင်ပေမည်။ ကျနော်ကြိုးစား၍ စုံစမ်းခဲ့သမျှကား အချည်းအနှီးမျှသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပက်ချက်နန်းတော် တွင် ထောင်ဘာယာအဖြစ် လုပ်နေစဉ်ကာပင် ဘာကလေးတခုမျှ အစွန်းအစရှာမတွေ့ခဲ့။ ဤကိစ္စတွင် ရန်သူ၏စနက်လဲ တချို့တ၀က် ပါပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ပေါ့လျော့မှုလဲ အတော်များများကြီး ပါဝင်ပေမည်။ မြေအောက်တွင် - ၂ - နှစ်ကြာမျှ အောင်မြင်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြသဖြင့် ရဲဘော်များသည် သတိပေ့ါလျော့ လာကြသည်။ ငိုက်လာကြသည်။ မြေအောက်လုပ်ငန်းကား ကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ ရဲဘော်သစ်များကိုလဲ တယောက်ပြီးတယောက် ဆွဲသွင်းလာကြသည်။ အခြား ကိစ္စများအတွက် ဘေးဖယ်၍ချန်ထားရမည့် ရဲဘော်များကိုပါ ဆွဲသွင်းလာကြသည်။ ပါတီစက်ယန္တရားလဲ အ၀န်းကျယ်လာကာ ထိန်း၍မရ သိမ်း၍မရအောင်ပင် ရှုပ်ထွေးလာသည်။ ရန်သူတို့သည် ပါတီဌာနချုပ်ကိုထိုးနှက်ရမည့် လက်သီးချက်ကို အချိန်ယူ၍ ပြင်ဆင်နေခဲ့ပုံရသည်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံအား ၀င်တိုက်ရန်ပြင် ဆင်ပြီးသည့်အချိန်တွင်မှ ထိုလက်သီးချက်လဲ ကျရောက်လာလေသည်။
အစက ကျနော်သည် ရဲဘော်ပေါင်းမည်မျှ အဖမ်းခံကြရသည်ကို အပြည့်အစုံမသိခဲ့။ သာမန်အဆက်အသွယ်များကို စောင့်မြဲစောင့်နေခဲ့သည်။ သို့ သော် အဆက်အသွယ်ကား မရတော့။ တလမျှကြာသောအခါ ကိစ္စအကြီးအကျယ်တရပ် ဖြစ်နေပြီဟူသောအချက်မှာ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ အဆက်အသွယ်ကို စောင့်နေရုံနှင့်မပြီးတော့ဟူသော အချက်မှာလဲ ရှင်းလာသည်။ ကျနော်သည် အဆက်အသွယ်ကို ကိုယ်တိုင်လိုက်၍ ရှာပါတော့သည်။ အခြားသူများသည်လဲ ဤ သို့ပင် ရှာဖွေကြလေတော့သည်။
ကျနော်ပထမဦးစွာ ရှာ၍တွေ့သူကား ချက်ခီတိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းခရိုင်မှ ခေါင်းဆောင် ဟောန်းဇာ၊ ဗီစကောချီလ် ဖြစ်ပါသည်။ သူကား လက်စွမ်းလက် စ ရှိသူဖြစ်သည်။ ပါတီအနေနှင့် ဗဟိုသတင်းစာတစောင် မရှိဘဲဖြစ်မနေရန်၊ ရူဒဲပရားဗော သတင်းစာထုတ်လိုသည်။ သတင်းစာအတွက် သတင်း၊ စာမူများပင် ပြင်ဆင်ထားသည်။ ကျနော်က ခေါင်းကြီးပိုင်းကို ရေးသည်။ သို့သော် ရရှိထားသောသတင်းများ (၎င်းသတင်းများကို ထိုအချိန်အထိ ကျနော်မကြားဖူးခဲ့) ကို ရူဒဲ ပရားဗော အမည်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ၊ မေဒေးသတင်းစာဟု ထုတ်ပြန်ကြရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားနေရာတနေရာမှ ရူဒဲပရားဗောသတင်းစာကို အရေးပေါ် အချိုးအစားမျိုးဖြင့် ထုတ်ဝေလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။
သို့ဖြင့် ပြောက်ကျားလုပ်ငန်းများ တလပြီးတလ ဆက်၍လာလေသည်။ ပါတီကား ပြင်းထန်လှသောဒဏ်ကို ခံလိုက်ရသည်။ သို့သော် ဒဏ်ချက် ကြောင့်သေ၍မသွား။ ရာပေါင်းများစွာသော ရဲဘော်သစ်တို့သည် တပိုင်းတစ ကျန်ရစ်သောအလုပ်တို့ကို ကောက်၍ကိုင်ကြသည်။ ကျဆုံးသွားသော ခေါင်းဆောင် များ၏နေရာသို့ လူသစ်များသည် ခိုင်မာသော သန္ဓိဌာန်များဖြင့် ၀င်လာကြသည်။ စည်းရုံးရေး၏ အခြေခံများမပြိုကွဲရန် ပျော့တီးပျော့ဖတ် ဖြစ်မကုန်ရန် ကြိုးစား အားထုတ်ကြလေသည်။ ဗဟိုဌာနချုပ်သာ လိုမြဲလို၍နေလေသည်။ ပြောက်ကျားလုပ်ငန်းများတွင် အန္တရာယ်များရှိသည်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံအား တိုက်ခိုက်လိမ့် မည်ဟု တွက်ထားကြသောအချိန်၊ ဤသို့သော အရေးကြီးဆုံးအချိန်မျိုး၌ တက်ညီလက်ညီ မလုပ်နိုင်မည်စိုးရသည်။
ကျနော်၏ လက်တွင်းသို့ ပြောက်ကျားစနစ်ဖြင့် ထုတ်ဝေနေသေးသော ရူဒဲပရားဗော သတင်းစာတစောင် ရောက်လာသောအခါတွင် နိုင်ငံရေးဝါ ရင့်သော လက်ရာတခုကို ရိပ်မိခဲ့ပါသည်။ ကျနော်တို့၏ မေဒေးသတင်းစာကား များစွာမစွန်လှ။ သို့သော် အခြားသူများသည် ထိုသတင်းစာကို တွေ့ရသောအခါ တွဲ၍ အလုပ်လုပ်နိုင်လောက်သည့် လူတယောက်ရှိသည်ဟု အကဲခတ်မိကြပြန်လေသည်။ သို့ဖြင့် တဦးနှင့်တဦး လိုက်လံ၍ ရှာဖွေကြပါတော့သည်။
ရှာရသည်ကား တောကြီးမျက်မဲထဲတွင် ရှာရသည်နှင့်တူသည်။ အသံတသံ ပေါ်လာသဖြင့် ထိုအသံနောက်သို့ လိုက်ကြသည် - ထိုခဏ၌ပင် အသံ သည် အခြားတဖက်မှ ပေါ်လာပြန်လေသည်။ ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကို ခံခဲ့ရကြရသဖြင့် ပါတီတရပ်လုံးမှာ သတိထားနေကြသည်။ နိုးနိုးကြားကြား ဖြစ်နေကြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဗဟိုဌာနချုပ်မှလူနှစ်ယောက်သည် တယောက်နှင့်တယောက် ဆက်သွယ်မိကြပါမည့်အရေး တယောက်က တယောက်အပေါ်ထားရှိသော အစမ်းအသပ်၊ အစစ်အဆေးပေါင်းစုံတို့ကို ထိုးဖောက်ကြရသည်။ အချင်းချင်းသာမက၊ ဆက်သွယ်ရေးကို ကိုင်ထားကြသော အခြားသူတို့၏ စမ်းသပ်မှုများ၊ အထစ်အထေ့များကိုလဲ ကျော်နင်းကြရသည်။ ပို၍ခက်ခဲသော ကိစ္စမှာ ကျနော်က ကျနော်ရှာနေသောသူကို မသိသလို၊ သူကလဲ ကျနော်မည်သူမှန်း မသိခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကား ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးသိကြသည့် ကွင်းဆက်တခုကို ရှာ၍တွေ့ကြသည်။ ထိုသူကား ဆရာဝန် မီးလော့ရှ်၊ နဲဒဗြဲဒ် ဟူသောအလွန် တော်သည့် သူငယ်တယောက်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းသည်ကျနော်တို့၏ ပထမဆုံးသော ဆက်သားဖြစ်လေသည်။ ဤသို့ ကြုံလာရခြင်းသည်ပင်လျှင် မတော်တ ဆ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခြင်းလဲ ပါသည်။ ဇွန်လအလယ်ပိုင်းတွင် ကျနော်နေမကောင်းဖြစ်သဖြင့် ကျနော်အားဆေးကုရန် လီဒါ့ကိုလွှတ်၍ သူ့အားခေါ်ခဲ့ရပါသည်။ သူကား ဘာ့က်စ်တို့၏ အိမ်သို့ချက်ခြင်းပေါက်လာကာ ထိုနေရာတွင်ပင် သူနှင့်ကျနော် နားလည်မှု ရသွားကြပါသည်။ သူကိုယ်တိုင်ပင် `အခြားသူ´ ကိုရှာဖွေရန် တာဝန်ရထားခဲ့သည်၊ သို့သော် သူရှာရမည့်သူမှာ ကျနော်ဖြစ်မှန်း မရိပ်မိခဲ့။ မရိပ်မိသည်သာမက၊ တဖက်တွင်ရှိသော သူတို့ကဲ့သို့ပင် ကျနော်ကား အဖမ်းခံရသည်၊ သေကောင်းပင် သေဆုံးခဲ့ပြီဟု ယုံကြည်နေလေသည်။
၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဟစ်တလာသည် ဆိုဗီယက်ယူနီယံကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်လေသည်။ ထိုနေ့ည၌ပင် ဤအဖြစ်အပျက်သည် ကျနော်တို့အတွက် မည်သို့အဓိပ္ပာယ်ပါနေသည့်အကြောင်း စာတမ်းကလေးတစောင်ကို ဟောန်းဇ်ဗီစကောချီလ်နှင့်အတူ ဖြန့်ချိလိုက်ပါသည်။ ဇွန်လ ၃၁ ရက်နေ့ တွင် ကျနော်ကြာမြင့်စွာ ရှာဖွေနေသောသူနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျနော်သတ်မှတ်ထားသော အိမ်သို့ သူလာ၍တွေ့ပါသည်။ သူ့အနေနှင့်မည်သူ့ ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိနှင့်ပြီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျနော့်ဘက်ကမူ မည်သူနှင့် တွေ့ရမည်ကိုမသိသေး။ ထိုနေ့ညကား နွေရာသီ၏ညဖြစ်သည်။ ဖွင့် ထားသော ပြူတင်းပေါက်များမှနေ၍ နန်းလုံးကြိုင်ပန်းရနံ့များ သင်းပျံ့၍နေကြသည်။ ဤသို့အခိုက်အတန့်ကား ချစ်သူများဆုံတွေ့ရန် သင့်တော်လှသော အချိန်ပင် ဖြစ်သည်။ သူရောက်သောအခါတွင် ကျနော်တို့သည် ပြူတင်းပေါက်များမှ လိုက်ကာများကိုဆွဲပိတ်လိုက်ကြကာ ဓာတ်မီးကိုဖွင့်လိုက်ကြသည်။ ဤတွင် ကျနော်တို့ နှစ်ဦးကား တဦးကိုတဦး ပွေ့ဖက်ရင်း နှုတ်ဆက်မိကြသည်။ ထိုသူကား ဟောန်းဇာ၊ ဇိကာ ပင်ဖြစ်သတည်း။
ဤသို့ဆိုလျှင် ၁၉၄၁ - ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ဗဟိုကော်မတီတဖွဲ့လုံး အဖမ်းခံခဲ့ရသည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ဗဟိုကော်မတီဝင် တယောက် တည်း ဇိကာ တယောက်တည်းသာ လွတ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ သူ့ကိုသိခဲ့ကြသည်မှာ ကြာပြီ။ ခင်မင်နေခဲ့သည်မှာလဲ ကြာလှပြီ။ သို့သော် ယခုသူနှင့်တွဲ၍ အလုပ်လုပ်ရခါမှ သူနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီး သိကျွမ်းလာရပါသည်။ သူကား ၀တုတ်တုတ်ဖြစ်သည်။ တပြုံးပြုံးနှင့်နေတတ်၍ ဦးလေးကြီးတယောက်၏ အသွင်အပြင်ကို ဆောင်နေတုန်းပင်ဖြစ်သည် - ပါတီလုပ်ငန်းတွင်ကား မာရေကျောရေ ရှိသည်၊ ဈေးလျော့ခြင်းမရှိ၊ သန္နိဌာန်ခိုင်မြဲ၍ ပြတ်လည်းပြတ်သားသည်။ ကိုယ့်တာဝန်မှ တပါး ကိုယ့်အတွက်ဆို၍ ဘာမျှမသိ၊ သိလဲ မသိလို။ တာဝန်ကို အပြည့်အ၀ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အခြားကိစ္စအရာရာကို ပစ်ပယ်ထားလေသည်။ လူများကို ချစ်တတ် ခင်တတ်သည်။ သို့သော် လူတို့၏အပြစ်များကို မျက်စိမှိတ် လျစ်လျူထားခြင်းဖြင့် ထိုသူတို့၏ ချစ်ခင်မှုကို ၀ယ်ယူလေ့ မရှိပေ။
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပင် ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား နားလည်မှုရရှိကြသည်။ နောက်ရက် အနည်းငယ်အတွင်းပင် ကျနော်သည် ပါတီခေါင်းဆောင်မှုအ ဖွဲ့သစ်မှ တတိယအဖွဲ့ဝင်ကို တွေ့ဆုံရသည်။ သူကား ဇိကာနှင့် မေလကတည်းကပင် အဆက်အသွယ်ရနေသူ ဟောန်းဇာ၊ ချာရနီ ဖြစ်သည်။ အရပ်ထောင်ထောင် မောင်းမောင်းနှင့် ခံ့ညားသော လူငယ်တယောက်ဖြစ်သည်။ လူများအပေါ် သဘောထားဖြူဖွေးလှသည်။ စပန်ပြည်တွင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်၍ အဆုပ်ကို ကျည်ဆံတတောင့်က ထုတ်ချင်းခတ်၍ ဖောက်သွားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာမှ နာဇီဂျာမနနကိုဖြတ်ကာ တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ သူကား အမြဲတမ်းပင် စစ်သားဆန်ဆန်နေသည်။ မြေအောက်လုပ်ငန်းများတွင်လဲ အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသည်။ ဉာဏ်ထက်သည်။ အမြဲတမ်းပင် ကြံတတ် ဖန်တတ်သည်။
အကျဉ်းအကြပ်ထဲတွင် လက်တွဲ၍ လပေါင်းများစွာ တိုက်ပွဲဝင်နေကြရသည့်အလျောက် ကောင်းမွန်လှသော ရဲဘော်စိတ်တို့သည် ကျနော်တို့သုံးဦး အား ရစ်ပတ်သွယ်နှောင်နေပါတော့သည်။ ကျနော်တို့ကား ဗီဇစရိုက်များအနေနှင့်၎င်း တဦးချင်းနိုင်နင်းသောအလုပ်များအရ၎င်း၊ တယောက်လိုသည်ကို တ ယောက်က ဖြည့်မိကြသည်။ ဇိကာကိုကြည့်လျှင် သူကား စည်းရုံးရေးမှူး။ လိုရင်းကို လိုက်တတ်သည်။ လှုပ်၍မရလောက်အောင် တိကျသည်။ မစားရ ၀ခမန်းစ ကားများဖြင့် လှိမ့်၍မရ။ ရရှိသော သတင်းအစအနအတိုင်းကို ဖောက်ထွင်းကြည့်၍ အတွင်းမှအနှစ်သာရ ပေါ်လာသည့်အထိ စီစစ်တတ်သည်။ ပေါ်လာသော အကြံပေးချက်ကို အဘက်ဘက်မှနေ၍ စူးစမ်းလေ့လာသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လုပ် မလုပ်ကို စစ်ဆေးသည့်အခါတွင် ကြင်နာသောစိတ်ကို ပြသလောက်၊ တင်းမာမှုကိုလဲပြသည်။ ချာရနီကို ကြည့်လျှင် သူကား ရန်သူကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးရေးနှင့် လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်မှုပြင်ဆင်ရေးအတွက် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ စစ်သားစကားလုံးများနှင့် တွေးတတ်သည်။ အသစ်ကို ရှာတတ်သည်။ သဘောထားကြီးသလို အကြံအစည်လဲ ကျယ်ပြန့်သည်။ နည်းသစ် လူသစ်များရှာရမည် ဆိုလျှင် မောရမှန်း ပမ်းရမှန်းမသိ၊ ပျော်၍မဆုံး။ ကျနော်ကား လှုံ့ဆော် ၀ါဒဖြန့်ချိရေးသားဖြစ်သည်။ နှာခေါင်းက အနံ့ခံမိရာကို လိုက်တတ်သော သတင်းစာဆရာ ဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးအနယ် အနည်းငယ်ကျွံတတ်ခြင်းကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်သော ဓလေ့ဖြင့် ထိန်းထားသည်။
ဌာနခွဲဝေခြင်းကား စင်စစ်အားဖြင့် အလုပ်ခွဲခြားခြင်းမဟုတ်၊ တာဝန်ခံရာကိစ္စများ ခွဲဝေမှုသာဖြစ်လေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လိုအပ်လာပြီဆို လျှင် ကျနော်တို့သည် တယောက်ချင်း တယောက်ချင်းအနေဖြင့် နေရာတကာတွင် ကိုယ့်အစွမ်းနှင့်ကိုယ် ၀င်လုပ်ကြရသည်။ အလုပ်လုပ်ရသည်မှာလဲ မလွယ်ကူ လှပေ။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပါတီပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့သော ဒဏ်ချက်မှာ ယခုထက်ထိ ဟင်းလင်းပွင့်နေသေးသည်။ အနာကား မကျက်တတ်သေး။ အဆက်အ သွယ်အားလုံးကား ပြတ်သတ်၍နေသည်။ အချို့နေရာများတွင် အဖွဲ့တဖွဲ့လုံး ကျဆုံးသွားသည်။ အချို့နေရာများတွင် အဖွဲ့များသည် လူတော်များဖြင့် တောင့်တင်း ၍နေသော်လဲ ၎င်းတို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်လမ်းမရှိ။ အစုအဝေးတခုလုံး၊ စက်ရုံတရုံလုံး၊ ခရိုင်များပင် ခရိုင်အလိုက်လပေါင်းများစွာ အဆက်ပြတ်နေခဲ့ပြီးသည့် နောက် ပိုင်းမှ အဆက်အသွယ်ကလေးများပွင့်လာသည်။ ကျနော်တို့ကားယုတ်စွအဆုံး သူတို့လက်တွင်းသို့ဗဟိုသတင်းစာ ရောက်လိမ့်မည်၊ ထိုသတင်းစာထဲတွင် ပါသည့် အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်၍သာနေခဲ့ကြရသည်။ နေစရာအိမ်လဲမရှိ၊ ယခင်ကသုံးခဲ့သောအိမ်များကို ချဉ်းကပ်ရသည်မှာလဲ အန္တရာယ်များ ၀ိုင်းနေသေးသည်၊ အစပိုင်းတွင် သုံးစရာငွေပင်မရှိ၊ အစားအသောက်ပြဿနာကလဲ အလွန်ခက်ခဲသည်။ ကိစ္စအများအပြားကို စလုံးမှပြန်၍စလာရန် လိုလာသည်။ ပါတီအနေနှင့် ပါတီတည်ဆောက်ရေး၊ ပြင်ဆင်ရေး စသည်တို့နှင့်သာ မဖူလုံနိုင်တော့သည့်အချိန်မျိုးတွင်မှ ဤသို့သော အခက်အခဲများကို လာ၍ကြုံနေရသည်။ ထိုအချိန်ကား ဆိုဗီယက်ယူနီယံကို ရန်သူများက ၀င်တိုက်လိုက်သော အချိန်ဖြစ်သည်။ ပါတီအနေနှင့် တိုက်ပွဲအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရန် လိုလာသော အချိန်ဖြစ် သည်။ အုပ်စိုးနေသော ရန်သူတို့အား ပြည်တွင်း စစ်မျက်နှာဖွင့်၍ တိုက်ရန်၊ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အင်အားများနှင့်သာ မက တမျိုးသားလုံး၏ အင်အားများဖြင့် ရန်သူတို့အား စစ်အငယ်စားတပွဲ ဆင်နွှဲ၍ တိုက်ခိုက်ရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၁ ခုနှစ်အထိသော ကာ လမှာ ပြင်ဆင်ရေးအချိန်မျှသာဖြစ်၍ ပါတီသည် မြေအောက်နက်နက်တွင် ခိုအောင်းနေခဲ့သည်။ ဂျာမန်ပုလိပ်များထံမှသာမက တမျိုးသားလုံးထံမှလဲ တိမ်းရှောင် နေခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင်ကား ပါတီသည် သွေးရှင်ရှင်ယိုစီးနေသည့်တိုင်အောင် ရန်သူများ၏မျက်ကွယ်တွင် မြေအောက်လုပ်ငန်းကို ခိုင်ခန့်အောင် လုပ်ရသည်။ စနစ်ကျအောင် လုပ်ရသည်။ တချိန်တည်း၌ပင် မြေအောက်မှနေ၍ တမျိုးသားလုံး၏ ရှေ့မှောက်သို့ ထွက်လာရသည်။ ပါတီဝင်မဟုတ်သော သူများနှင့်ဆက်ဆံရ သည်။ လူထုကြီးတရပ်လုံးထံ ချဉ်းကပ်၍ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသူတိုင်းနှင့် ဆွေးနွေးရသည်။ တွန့်ဆုတ် တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေ သေးသောသူများကိုပင် တိုက်ပွဲတွင်းသို့ပါလာအောင် တိုက်ရိုက် ခေါင်းဆောင်မှုပေးရသည်။
၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ လဆန်းသို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျနော်တို့သည် မရှုမလှ ပျက်စီးခဲ့ရသော စည်းရုံးရေးကို ပြန်လည်တည် ထောင်ပြီးခဲ့ပြီဟု မဆိုနိုင်သေး - ပြန်လည်တည်ဆောက်မိရန်လဲ အတော်ကြီးပင် လိုနေသေးသဖြင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည် - သို့သော် တာဝန်ကြီးကြီးမားမား များကို ယုတ်စွအဆုံး တပိုင်းတစမျှ ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် အမြုတေတခုကို ခိုင်မြဲစွာ ပြန်လည်စည်းရုံးမခဲ့ကြပြီဟု ဆိုနိုင်လာပါတော့သည်။ ပါတီ၏ သြဇာပျံ့နှံ့မှုမှာ လဲ ရုတ်ချင်းပင် သိသာလာသည်။ ရန်သူအား နှောင့်ယှက်ဖျက်စီးရေးများလဲ တိုးပွားလာသည်၊ စက်ရုံသပိတ်များလဲ တိုးပွားလာသည် - စက်တင်ဘာလကုန်တွင် ရန်သူတို့သည် ကျနော်တို့အား ဖိနှိပ်ရန် ဟိုင်းဒရစ်ကို ပို့လွှတ်လိုက်ကြသည်။ ပထမအကြိမ်ကြေညာလိုက်သော မာရှယ်လောကား ကြီးထွားလျက် ခြေသွက်နေပြီ ဖြစ်သော ရန်သူဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတို့ကို မချိုးနှိမ်နိုင်ခဲ့ပေ။ သို့သော ထိုလှုပ်ရှားမှု၏အရှိန်ကို သတ်လိုက်နိုင်ပါသည်၊ ပါတီအနေနှင့်လဲ ဒဏ်ရာအသစ်တို့ကို ခံစားလိုက်ရသည်။ အထူးသဖြင့် ပရာဟာခရိုင်နှင့် လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတို့မှာ အတော်ပင်ခံလိုက်ကြရသည်။ ပါတီအတွက်တန်ဘိုးရှိလှသော ယန်၊ ကရေးချီ။ ရှတန်စလ်။ မီးလောရှ်၊ ကရားဆနီ နှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားပင် ကျဆုံးသွားကြသည်။
သို့သော်လဲ ဒဏ်ရာတချက်ရလိုက်တိုင်း ရလိုက်တိုင်းပင် ပါတီသည် မည်သို့ဖျက်ဖျက် မပျက်နိုင်ကြောင်းကို ခင်ဗျားထပ်၍ ထပ်၍ တွေ့ရပြန်သည်။ တိုက်ပွဲဝင်သူတယောက် ကျဆုံးသွားသည် - သူ့နေရာတွင် အခြားလူတယောက် ကိုယ်စားထိုး၍ မရလျှင် သူ၏နေရာသို့ လူနှစ်ယောက် သို့မဟုတ် သုံးယောက် ၀င်လာကြသည်။ နှစ်သစ်သို့ ကူးသောအခါ၌ကား ကျနော်တို့သည် စည်းရုံးရေးကို ခိုင်မြဲစွာ ထူထောင်ပြီးကြလေပြီ။ အစစ အရာရာကို လက်လှမ်း၍ မှီနိုင်သည်လဲ မဟုတ်သေး၊ ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလလောက် ကျယ်ပြန့်သည့် အခြေအနေနှင့်လဲ အတော်ဝေးသည့်တိုင်အောင် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့် တိုက်ပွဲများတွင် ပါတီ ၏ တာဝန်များကို ကျေပြွန်နိုင်မည့် အဆင့်အတန်းသို့ ရောက်လာခဲ့လေပြီ။ လုပ်ငန်းကို ကျနော်တို့အားလုံးခွဲ၍ တာဝန်ယူခဲ့ကြသည်၊ သို့သော် အောင်မြင်မှုအတွက် အချီးမွမ်း အခံထိုက်ဆုံးသောသူမှာ ဟောန်းဇ်၊ ဇိကာပင် ဖြစ်လေသည်။
ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများအနေနှင့် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သည်ကိုကား အထူးပြောပြနေရန်မလို။ ရဲဘော်များ၏ လျှို့ဝှက်သောစာပေ သိုလှောင်ရာနေရာများ၊ အထပ် ခိုးများ၊ မြေအောက်လှောင်ခန်းများတွင် အထောက်အထားများ ဖူဖူလုံလုံတွေ့ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်သည်။ ကျနော်တို့သည် သတင်းစာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို ပါတီဝင်များသာမက၊ ပါတီဝင်မဟုတ်သူများပါ ဖတ်ရှုခဲ့ကြသည်။ တနေရာနှင့်တနေရာ တင်းကြပ်စွာဖြတ်တောက်ထားသော မြေ အောက် “စက်ရုံ” အများအပြားမှနေ၍ (စာကူးစက်များဖြင့်) စောင်ရေအမြောက်အများ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပုံနှိပ်စက်ဖြင့်လဲ ရိုက်နှိပ်ကြသည်။ စာစောင်များကို လိုအပ်သည့်အတိုင်း အချိန်မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန်ထုတ်ဝေသည်။ ဥပမာ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ရဲဘော် စတာလင်၏ တပ်မတော်အမိန့် ထုတ်ပြန် ချက်သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်ညနေပိုင်းတွင်ပင် ပထမ စာဖတ်ပရိတ်သတ်၏ လက်တွင်းသို့ ရောက်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နေခဲ့သူများမှာ ပုံနှိပ်စက်အလုပ်သမားများနှင့် ဆရာဝန်တို့၏ မြေအောက်စက်ရုံဖြစ်သည်၊ အထူးချွန်ဆုံးကား “ဖူးက်စ်လောရဲန်ဇ်” ခေါ် မြေအောက်စက်ရုံဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုယ် တိုင်လဲ “ဟစ်တလာကို ကမ္ဘာက ဆန့်ကျင်သည်” ဟူသော ပြန်ကြားရေးစာစောင်ကို ထုတ်ဝေနေကြသည်။ ကျန်သမျှကိုကား ကျနော်ချည်း ကြုံး၍လုပ်သည်။ အခြားကေဒါများကို မဖြုန်းချင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျနော်ကျဆုံးလျှင် တက်ရမည့် အရံရဲဘော်တယောက်ကိုလဲ အသင့်ပြင်ထားသည်။ သူသည် ကျနော် အချုပ်ခံရသည်နှင့် တပြိုင်နက် အလုပ်ကိုဝင်လုပ်ကာ ယခုထက်ထိလဲ အလုပ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
အလုပ်တခု လုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် လူအနည်းဆုံးသုံး၍ ဖြစ်နိုင်ရန် ပါတီယန္တယားကို အလွယ်ဆုံး အရှင်းဆုံး တည်ဆောက်ကြပါသည်။ ယခင်က သုံး ခဲ့သော ကွင်းဆက်များသံကြိုးရှည်စနစ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ကြသည်။ ဤစနစ်မျိုးကား ပါတီစက်ယန္တယားကို လုံခြုံစေသည်ထက် အန္တရာယ်များစေသည်ကို ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက တွေ့ရှိခဲ့ကြရပေပြီ။ နည်းသစ်ကို ထွင်လိုက်သောအခါ ကျနော်တို့တယောက်ချင်း တယောက်ချင်းအတွက် အန္တရာယ်များ ပိုလာ သည်၊ သို့သော် ပါတီအတွက်ကား အတော်ကြီးပင် ဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးသွားလေသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျရောက်ခဲ့သော ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်မျိုးကား ထပ်မံ၍ မပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပေ။
ထို့အတွက်ကြောင့်လဲ ကျနော်အဖမ်းခံရသည့်အခါတွင် ဗဟိုကော်မတီသည် လူသစ်တယောက်ကို အစားထိုးလျက် အလုပ်လုပ်မြဲဆက်၍ လုပ်နေနိုင် ခဲ့သည်။ ကျနော်နှင့်အနီးကပ်ဆုံး လုပ်ဖော်လုပ်ဖက်ပင်လျှင် ထိုကိစ္စအကြောင်း မရိပ်မခဲ့ပေ။
ဟောန်းဇာ၊ ဇိကာမှာ ၁၉၄၂ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့ည၌ အဖမ်းခံရသည်။ ထိုကိစ္စမှာလဲ အဖြစ်ဆိုး၍ မတော်တဆဖြစ်ရသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ ထိုအ ချိန်မှာ ဟိုင်းဒရစ်အားလုပ်ကြံပြီး နောက်တညဖြစ်သည်။ ရန်သူတို့၏ စက်ယန္တရားတခုလုံးမှာ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေလျက် ပရာဟာတမြို့လုံးပိုက်စိတ်တိုက်၍ လူများ ကို လိုက်ဆွဲနေကြသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ဇိကာ ခိုအောင်းနေသော စတရဲရှောဗိစဲ အရပ်မှ အိမ်အတွင်းသို့လဲ ဂက်စတာပိုများ ရောက်လာကြသည်။ ဇိကာ၏ မှတ် ပုံတင်လက်မှတ်မှာ နေသားတကျဖြစ်နေ၍ ၎င်းတို့သင်္ကာမကင်းမဖြစ်ဘဲ လွတ်ထွက်သွားနိုင်စရာ အကြောင်းရှိသည်။ သို့သော် ဇိကာသည် အိမ်ရှင်သူတော် ကောင်းများကို ဒုက္ခမရောက်စေလိုသောကြောင့် သုံးထပ်တိုက်ပြူတင်းပေါက်မှနေ၍ လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းကို ရှာသည်။ ထိုသို့ကြိုးစားစဉ် အောက်သို့လိမ့်ကျ၍ ကျောရိုးတွင် သေလောက်သော ဒဏ်ရာများရကာ ထောင်ဆေးရုံသို့ရောက်လာသည်။ ရန်သူတို့သည် မိမိတို့၏ လက်တွင်းသို့ မည်သူရောက်လာမှန်း လုံးဝမသိ ကြ။ နောက်ဆယ့်ရှစ်ရက်ကြာမှ ဓာတ်ပုံများ ညှိနှိုင်း၍ကြည့်ယင်း မည်သူ မည်ဝါဖြစ်သည်ကို သိသွားကြသည်။ ထိုအခါမှ သေလုမြောပါးဖြစ်နေသူကို စစ်ဆေးမေး မြန်းရန် ပက်ချက်နန်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင်လာကြသည်။ ထိုနေရာတွင် ကျနော်တို့နှစ်ဦးကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေးကြသည်။ ဤသည်ကား နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရ ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လဲ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြသည်။ သူသည် ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော ရွှန်းရွှန်းစားစား အပြုံးကြီးဖြင့် ကျနော့်ကိုပြုံး၍ကြည့်ယင်း …..
- ယူလာ နေကောင်းအောင် နေဟေ့။
ဟု ပြောသွားသည်။ ဤစကားတို့ကား ရန်သူများအနေနှင့် သူ့ထံမှ ကြားလိုက်သမျှသော စကားအားလုံး ဖြစ်လေသည်။ နောက်ထပ်၍ကား စကားတ ခွန်းမျှ မဟတော့။ မျက်နှာပေါ်တွင် အရိုက်အနှက် အနည်းခံလိုက်ရသည်နှင့် မေ့မြောသွားသည်။ နောက် နာရီအနည်းငယ်အတွင်း သေဆုံးသွားလေသည်။
သူ အဖမ်းခံရကြောင်းကို မေလ ၂၉ ရက်နေ့ကတည်းက ကျနော်သတင်းကြးရသည်။ တပ်ထောက်များကား ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ၎င်းတို့၏ အကူအညီဖြင့် ကျနော်ရှေ့ရှောက် လုပ်ရမည့်လမ်းစဉ်အနက် တချို့တ၀က်ကို ဇိကာနှင့် သဘောတူညီချက် ယူခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လမ်းစဉ်တခု လုံးကို ဟောန်းဇာ၊ ချာရနီက မိမိ၏ သဘောတူညီချက် ဖြည့်စွက်၍ ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤသည်ကား ကျနော်တို့သုံးယောက်၏ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်လဲ ဖြစ်ပါ သည်။
ဟောန်းဇာ၊ ချာရနီမှာ ၁၉၄၂ ခု၊ နွေရာသီအတွင်း၌ အဖမ်းခံရသည်။ ဤကိစ္စကား မတော်တဆ ဖြစ်ပွားရသော ကိစ္စမဟုတ်တော့၊ သူနှင့်ဆက်သွယ် နေသော ယန်၊ ပေါကောရနီ ဆိုသူ၏ ရမ်းကားသော စည်းကမ်းချိုးဖျက်မှုကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ ပေါကောရနီသည် ရှေ့တန်းပါတီကေဒါတယောက်ပီပီ မနေ တတ်ပေ။ နာရီအနည်းငယ်မျှ အစစ်ဆေးခံရသည့်နောက်ပိုင်းတွင် - မှန်သည်၊ အတော်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လုပ်ကြသည်၊ သို့သော် ဤသည်ကား ထုံးစံအတိုင်း ပင် မဟုတ်လော - နာရီအနည်းငယ်မျှ အစစ်ဆေးခံရသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကာ ချာရနီနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ရာအိမ်ခန်းကို ဖော်ပြောလိုက်လေ တော့သည်။ ထိုနေရာမှတဆင့် ဟောန်းဇာရှိရာသို့ ခြေရာခံမိကြလျက်၊ နောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင် ဟောန်းဇ်လဲ အဖမ်းခ့ရလေတော့သည်။
သူ့အား ခေါ်သွင်းလာကြသည်နှင့်တပြိုင် ကျနော်နှင့် မျက်နှာချင်း ဆိုင်ပေးကြသည်။
- မင်း သူ့ကို သိသလား။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးပင် စည်းဝါးကိုက်စွာ ထွက်ဆိုကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကား သူသည် စကားပြောရန်ပင် လုံးဝငြင်းဆန်လိုက်လေသည်။ ယခင် ဒဏ်ရာဟောင်းကြောင့် ကြာရှည်စွာ အညှဉ်းပမ်းမခံလိုက်ရ။ များမကြာမီပင် သတိလစ်သွားသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစစ်ခံရာသို့ သွားသောအခါတွင်ကား တိကျသော သတင်းအခြေအနေများကို ရရှိပြီးဖြစ်၍ ထို့အတိုင်းလဲ ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့လေသည်။
သူ့ထံမှ ဘာကလေးတချက်မျှ မရလိုက်ကြ။ သူ့အား ချုပ်နှောင်ထား၍ ကြာမြင့်စွာ စောင့်နေခဲ့ကြသည်။ သက်သေ သာဓက အသစ်တခုပေါ်လာလျှင် သူ့ထံမှ စားများပွင့်ထွက်လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်ကိုးနေခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လဲ သူတို့၏ မျှော်လင့်ချက်များကား အကောင်အထည် ဖြစ်မလာခဲ့။
ထောင်သည် သူ့အား ပြောင်းလဲသွားအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့။ သူသည် သွက်သွက်လက်လက်၊ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း၊ ရဲရဲရင့်ရင့်နှင့်ပင် နေသည်။ သူ၏ ရှေ့ တွင်ကား သေလမ်း တလမ်းတည်းသာရှိသည်။ သို့သော်လဲ အသက်ရှင်နေသည့် သူများအား မျှော်လင့်ချက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးနေခဲ့လေသည်။
၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလကုန်လောက်တွင် သူ့အား ပန်းကရာ့စ်ထောင်မှ ဗြုံးကနဲ ခေါ်ထုတ်သွားကြသည်။ ဘယ်သို့ ခေါ်သွားကြမှန်း မသိ။ ဤနေရာမှလူ များ ဤကဲ့သို့ ဗြုံးကနဲပျောက်သွားခြင်းကား ကောင်းသော အတိတ်နိမိတ်မျိုးမဟုတ်ပေ။ ခင်ဗျားတွက်သည်မှာ မှားကောင်း မှားနေပေမည်။ သို့သော်လဲ သူ့အား တခါတလေ ပြန်၍ တွေ့ကြရဦးမည်ဟူ၍ကား ကျနော်မထင်တော့။
ကျနော်တို့ကား သေဘေးကို အမြဲတမ်း ထည့်၍တွက်ထားကြသည်။ ကျနော်တို့သာ ဂက်စတာပို၏ လက်တွင်းသို့ ရောက်သွားလျှင် ပြန်လမ်းဟူ၍ မရှိတော့ကြောင်း ကျနော်တို့သိကြသည်။ ဤနေရာတွင် ကျနော်တို့လဲ ထိုအသိဉာဏ်အတိုင်း ကျင့်သုံးနေထိုင်ခဲ့ကြလေသည်။
ကျနော်၏ ပြဇာတ်သည်လဲ အဆုံးသို့တိုင်လုပေပြီ။ ထိုဇာတ်သိမ်းခဏ်းကိုကား ကျနော်မရေးခဲ့တော့။ သိလဲ မသိတော့။ ထိုဇာတ်သိမ်းခဏ်းကား ပြဇာတ်မဟုတ်တော့။ ဘ၀ပင် ဖြစ်လေသည်။
ဘ၀တွင်ကား ပွဲကြည့်သူဟူ၍ မရှိ။
လူအပေါင်းတို့ ခင်ဗျားတို့အား ကျနော်ချစ်ခဲ့သည်။ နိုးနိုးကြားကြား ရှိကြလော့။
၉၊ ၆၊ ၄၃။
Posted by ရွှေဥသြ at 07:50
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ ဂျူးလိယက်ဖူးချစ် (စကားေ...
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ ဂျူးလိယက်ဖူးချစ် (အခဏ်း...